मगर संघ युकेले एक करोडको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने | We Nepali
नेपालको समय: १६:१५ | UK Time: 10:30
मगर संघ युकेले एक करोडको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने
२०७२ कार्तिक १९ गते २०:१२
मगर संघ युकेले एक करोड रुपियाँको छात्रवृत्ति कोष स्थापनाको लक्ष्य राखेर यही नोभेम्बर २१ तारिखका दिन युकेको अल्डरसटमा च्यारिटी डिनर आयोजना गर्दैछ । गतवर्ष मात्र युकेमा घर किनेको संघले यस्तो महत्वाकांक्षी योजना किन ल्यायो त ? यसै सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष दुतबहादुर पुनसित गरिएको संक्षिप्त वार्ता :
नोभेम्बर २१ मा च्यारिटी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ । यसको लक्ष्य के हो ?
मगर संघ युकेले लामो समयदेखि हरेक वर्ष च्यारिटी डिनर आयोजना गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न सेवामूलक कामका लागि विगतका च्यारिटी डिनरहरु आयोजना गरिएका थिए । त्यसमा केही वर्ष मगर संघ युकेको घर खरिदका लागि च्यारिटी डिनर गरियो । गतवर्ष मगर संघको घर खरिद पनि गरियो र एक वर्षभित्रमा ऋण, मोर्गेज सबै चुक्ता गरियो । म मगर संघ युकेको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा मगर विद्यार्थीहरुका लागि एक करोड रुपियाँ राशीको छात्रवृत्ति बनाउने कार्यक्रम थियो । त्यसैले सो छात्रवृत्तिका लागि यो च्यारिटी डिनर आयोजना गरिएको हो ।
छात्रवृत्तिको अवधारणा कसरी आयो ?
मैले मगर संघ युकेमा बसेर काम गरेकै एकदशक भन्दा बढी भयो । यसरी काम गर्दै जाँदा शैक्षिक क्षेत्रमा मगरहरुको सहभागिता अत्यन्तै कम पाइयो । साक्षारता तहमा अरु जातिसरहकै उपस्थिति भए पनि जति जति उच्चतहमा पुग्दै जान्छ सहभागिता कम्ती कम्ती हुँदै गएको पाइयो । स्नातकभन्दा माथि विश्वविद्यालय तहमा पुग्दा त्यो अनुपात अति नै थोरै हुँदै जाने गरेको देखेँ । त्यसैले राज्यको विभिन्न निकायलाई चाहिने दक्ष र शिक्षित जनशक्ति तयार हुन नसकिरहेको पाएँ । त्यसैले स्नातकोत्तर (एमए) र विद्यावारिधि (पिएचडी) तहमा मगरहरुलाई अध्ययन गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भनेर यो छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्न लागिएको हो ।
छात्रवृत्तिको कुरा सुन्दा यो पूर्णत नेपालमा केन्द्रीत देखिन्छ । तपाईहरु त युकेमा केन्द्रीत संस्था कसरी संचालन गर्नुहुन्छ ?
हो, हामी युकेमा केन्द्रीत भए पनि छात्रवृत्ति नेपालमा वितरण हुने हो । यसका लागि हामी मगर संघ युकेको प्रमुख भूमिका रहने गरी विधिविधान, निर्देशिकाहरु निर्माण गर्नेछौँ र नेपालमा नेपाल मगर संघ, मगर विद्यार्थी संघ लगायतका देशव्यापी नेटवर्क भएका संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयन्त्र बनाएर यसलाई निस्पक्ष र पारदर्शी ढंगले वास्तविक गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीले लाभ पाउने गरी संचालन गर्नेछौँ ।
एमए वा पिएचडी तहमा पुग्ने योग्यता भएकाहरु त यतिकै जीवनमा शिक्षित भइसकेका हुन्छन् । अंग्रेजी र प्रविधिको ज्ञान नभएमा आउने दिनमा धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा भए जीवन त्यसैबाट गुजारा गर्न सकिन्छ । त्यता पनि छात्रवृत्ति विस्तार गर्न सकिन्छ कि ?
यसबारेमा पनि कुरा नउठेको होइन । छलफल पनि भए । तर धेरै नै व्यापक क्षेत्र देख्यौँ । काम गर्ने क्षेत्र स्पष्ट पारिएन भने अलिक भद्रगोल हुने हो कि भन्ने सम्भावना पनि रह्यो । त्यसैले अहिलेलाई एमए र पिएचडी तहमै छात्रवृत्ति केन्द्रीत गर्ने भन्ने सल्लाह भयो । तर यो छात्रवृत्तिको कार्यक्रम मगर संघ युकेको दीर्घकालिन कार्यक्रम भएकाले आगामी दिनमा संघको नेतृत्वले आवश्कयता हेरी निर्णय गरेर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न वा परिवर्तन गर्न सक्छ ।
यहाँले भन्नुभएको एक करोड रुपियाँ यही २१ तारिखको च्यारिटीबाट संकलन गर्ने हो ?
एक करोड राशीको छात्रवृत्ति कोष बनाउने भन्ने मगर संघ युकेको कार्यक्रम हो । यही च्यारिटी डिनरमा लक्षित गरिएजति सबै रकम उठ्छ भन्ने छैन । यो दीर्घकालिन कार्यक्रम हो । मगर संघ युकेले हरेक वर्ष कोष थप्दै लैजाने गर्छ । तर युकेमा मगर संघ युकेको संगठन विस्तार, सक्रियता र मगरहरुको संख्या हेर्दा उल्लेख्य रकम उठ्ने विश्वास लिएको छु । मगर संघ युकेका संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरु, शाखाका अध्यक्ष र सदस्यहरु, कार्यसमितिका सदस्यहरुले मात्र १०० पाउण्ड सहयोग गर्ने हो भने २०/२५ हजार पाउण्ड उठ्न सक्छ ।
मगर संघ युके जस्तै प्रवासमा रहेका अन्य मगर संघहरुले पनि छात्रवृत्ति कोषमा सहभागी हुन्छौँ भन्यो भने सहभागी गराउनु हुन्छ कि ?
अवश्य पनि । हामीले अहिले शुरुवात गरेका छौँ । नेपालभित्र वा बाहिरबाट मगरहरुलाई शिक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ छात्रवृत्तिका लागि सहयोग गर्न चाहने सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ । व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा प्रतिनिधित्व र सहकार्यका लागि छलफल गर्न हामी खुला छौँ ।